USmith utholwe engenecala ezinsolweni zokucwasa ngokwebala
UGRAEME Smith, obengumqondisi weCSA, utholwe ngabahluleli abazimele emsulwa ezinsolweni zokucwasa ngokwebala Isithombe: BACKPAGEPIX
OBENGUMQONDISI weCricket South Africa (CSA), uGraeme Smith, utholwe engenacala mayelana nezinsolo zokucwasa ngokwebala.
NgoDisemba nyakenye umxazululi obengamele iSocial Justice and Nation-Building (SJN), u-Adv Dumisa Ntsebeza, wethula umbiko wakhe owaveza ukuthi kukhona okuthile okungalungile okuvele ngesikhathi abadlali, abaqeqeshi nabanye abayingxenye yekhilikithi kuleli bezofakaza.
USmith wayengomunye wababesolwa ngokucwasa ozakwabo abamnyama ngokwebala ngesikhathi esengukaputeni wamaProteas, kanye nokuqasha uMark Boucher njengomqeqeshi weqembu lesizwe kungafanele esengumqondisi kwiCSA.
Umbiko weSJN waphuma nezincomo zokuthi kuphenywe kabanzi ukuze kuxazululwe konke okungaqondile okuvele kulezi zinkulumo.
I-CSA ilandele lezi zincomo, uSmith nayo bavela phambi kwabaxazululi abazimele, u-Adv Ngwako Maenetje no-Adv Michael Bishop.
Bobabili, iCSA noSmith, bebehlome ngabameli futhi bekunofakazi abaphekwe ngemibuzo nhlangothi zombili.
"Abukho ubufakazi obuqinisekisa ukuthi uSmith wacwasa uThami Tsolekile ngokwebala ngo-2012-2014," ifundeka kanjalo ingxenye yombiko okhishwe uMaenetje noBishop ofakwe kwi-website yeCSA.
“Abukho ubufakazi obungaqinisekisa ukuthi uSmith wayecwasa abaholi abamnyama kwiCSA.
“Abukho ubufakazi obuqinisekisa ukuthi ukuqashwa kukaMark Boucher, esikhundleni sika-Enoch Nkwe, njengomqeqeshi weqembu labesilisa lama-Proteas ngo-2019 kwakuhambisana nokucwasa ngokwebala.”
UMaenetje noBishop baphinde bakhipha isinqumo sokuthi iCSA ikhokhe zonke izindleko ezibhekane noSmith ngesikhathi ezophikisana nalezi zinsolo.
“Indlela lolu daba olusingathwe futhi lwaxazululwa ngayo iqinisekisa ukuzibophezela kweCSA ukubhekana nokwavela kwiSJN ngendlela ebucayi futhi eqinisekisa ubulungiswa nezixazululo," kusho usihlalo webhodi leCSA, uLawson Naidoo esitatimendeni.
“Njengoba sekufinyelelwe esiphethweni salolu daba, yisikhathi esihle sokuncoma igalelo elimangalisayo uGraeme abe nalo kwikhilikithi yaseNingizimu Afrika, okokuqala njengokaputeni wamaTest ohlale isikhathi eside emlandweni wekhilikithi nalokhu akwenze esengumqondisi wekhilikithi kusukela ngo-2019 kuya ku-2022.
“Iqhaza alibambe njengomqondisi wekhilikithi belimqoka ekwakhiweni kabusha kweqembu labesilisa lamaProteas futhi umshiyele isisekelo esiqinile lowo ozongena kulesi sikhundla.”
Inkontileka kaSmith njengomqondisi wekhilikithi iphele ekupheleni kukaMashi kulo nyaka kanti iCSA isisikhiphile isikhangiso salesi sikhundla. UBoucher yena kulindeleke ukuthi avele phambi kwekomidi eliqondiswa izigwegwe ngoMeyi mayelana nezinsolo zokucwasa ezavela kwiSJN.